မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင်ကစလို့ ကျပ်ငွေတန်ဘိုး ကျဆင်းခဲ့တာကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအပေါ် ရိုက်ခတ်လာနေရာမှာ စားသုံးကုန် လုပ်ငန်းတွေလည်း ပါဝင် လာပါတယ်။ မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ လဲလှယ်ရာမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာတန်ဘိုး မြင့်လာတာကြောင့် တချို့စားသုံးကုန်တွေ တင်သွင်းရာမှာ အကန့်အသတ်တွေနဲ့လည်း ကြုံနေရတာပါ။ ငွေကြေး မတည်ငြိမ်တဲ့ အခြေအနေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ကြုံနေရတဲ့ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ စားသုံးသူ တချို့ကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မုံဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ မခိုင် က...
မခိုင် (မုံဖုတ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်) ။. ။ ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းတွေ အတက်အကျကြမ်းတာပေါ့။ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့က ကုန်ကြမ်းတွေကို အများကြီးလည်း ဝယ်လှောင်ထားလို့မရသလို လိုအပ်မှ တလချင်းဝယ်ရသလို အခုနောက်လအတွက်ဝယ်ဖို့စ စီစဉ်တဲ့အချိန်က ကုန်ကြမ်းတွေ ဂျုံကအစ လေးသောင်းကနေ ခုနှစ်သောင်းခွဲဖြစ်သွားတာကအစ နိုင်ငံခြားသွင်းကုန် Jam တို့ ထောပတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းအတက်အကျကြမ်းတော့ကြတော့ ဆိုင်တွေက အရောင်းဖွင့်မပေးတော့ဘူး။ ရေရှည်ရပ်တည်လာတဲ့ လုပ်ငန်းတခုအနေနဲ့က သဘောက ပေါင်မုံတခုကို တထောင်ရောင်းနေရာကနေ ချက်ချင်းကြီး ကုန်ကြမ်းတက်လို့ဆိုပြီး တထောင်ငါးရာ ပြောင်းရောင်းဖို့ မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ အရင်းကို ပြန်ရဖို့အတွက် တော်တော်ခဲခဲရင်းရင်းဖြစ်လာတာပေါ့။ စားသုံးသူအတွက် မငဲ့ပဲ ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ တထောင်တန်မုံကနေ နှစ်ထောင်ဆိုပြီး ဆွဲတင်လိုက်ရင်တော့ အမြတ်ကျန်ချင်ကျန်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စားသုံးသူနည်းသွားမယ့်ဟာကိုလည်း ကိုယ်တွေက မလိုလားဘူးပေါ့။ ဒီကြားထဲမှာ ကျဉ်းထဲကြပ်ထဲ ပြသာနာစကြုံတွေ့နေရတာပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် ရန်ကုန်မှာ အသားကင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ လူငယ် ကိုဝေမင်း ကလည်း
ကိုဝေမင်း (အသားကင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ) ။. ။ ဂျုံနဲ့ပတ်သက်တာ ဈေးတက်သွားတယ်။ တနေ့ကပဲ ကျနော် ပလာတာဝယ်စားတာ ပုံမှန် ၂၅ဝ တန်က အခု ၅ဝဝတောင်ဖြစ်သွားတာ။ ၂ဆတက်သွားတာ။ ဈေးထဲမှာ ထိုင်းဖက်က လာတာတွေကို ဝယ်စားတာတွေဆို တော်တော်များများ ဈေးတက်သွားတာ။ ဒီတရက် ၂ရက်အတွင်းမှာ တထောင်ဝန်းကျင်တက်သွားတယ်။ ပုံမှန် ၈၀၀ တန်ပစ္စည်းက ထိုင်းဖက်က ပစ္စည်းက ၁၃ဝဝ လောက်တက်သွားတယ်။ အသားပြားတို့ ကြက်အူချောင်းတို့ ပုဇွန်လုံးတို့လေ။ ခုလောလောဆယ်မှာ ထိုင်းဖက် ကပစ္စည်းရောင်းနေတာပေါ့။ အရင်လို ပေါပေါလောလောနဲ့ ရောင်းမရတော့ဘူးပေါ့။ ဈေးတွေတက်တော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ အရင်က မကြုံဖူးဘူး။ အခုမှကြုံဖူးတာ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလိုအချိန်မှာ ဈေးထဲရောက်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့သူ မပိုပို က
မပိုပို ။. ။ သားငါးဈေးကတော့ ထွေထွေထူးထူးအရမ်းပြောင်းလဲသွားတာတော့ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားကဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပေါ့ ဒီချိစ် တို့ဘာတို့ ဈေးကြီးသွားတယ်။ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေဈေးကြီးတယ်။ ချီစ် က အရင်တုံးက ၃၅ဝဝတန်ကနေပြီး အခု ၄ဝဝဝ ။ ဝယ်ရင်းဈေးက နောက်ဆိုရင် ပြန်ပြီးဈေးကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ်ထပ်ဝင်ရင် ဈေးကြီးမှာလို့ပြောတယ်။ အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့ လူတွေက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများကြတယ်။ စီးပွားရေးကို ဒီထက်ပိုဆိုးလာမှာကိုတော့ မျှော်လင့်ထားပြီးသား။ ဒါပေမယ် အခြေခံလူတန်းစားအတွက်က ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်မယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း အခုက စစချင်းမို့မတက်သေးတာ။ နောက်ဆိုပိုပြီးတော့ တက်တော့မယ်။ အခုဆိုလည်း အလုပ်တွေအများကြီး ပြုတ်ကြတယ်လေ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် တခြားစားကုန်တွေ ဈေးတက်လာပုံကိုလည်း အမည်မဖော်လိုတဲ့ အိမ်ရှင်မတဦး က
အိမ်ရှင်မတဦး ။. ။ ဆန်ဈေးကတော့ အစတုံးက တအိပ်ကို ခြောက်သောင်း ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်။ အခုဟာက ၇ သောင်း ကျော်သွားပြီ။ ဒီပြင် ပစ္စည်းတွေလည်း အကုန်လုံး ဈေးတက်တယ်။ ကြက်ဥပဲ နည်းနည်း ဈေးကွာတယ်။ စားအုန်းဆီက အစက ၄ထောင်ကနေ အခု ၅ ထောင်ဖြစ်သွားပြီ။ အကုန်တက်တယ်။ နံပြားတချပ် ၃ရာ။ အရင်က ၁၅၀ ၊၂ဝဝ ပဲရှိတယ်။ ဈေးသည်တွေက ကုန်ဈေးနှုန်းတွေက တက်တော့ ရောင်းမကောင်းဘူး ၊ ဝယ်သူတွေလည်း သိပ်မရှိဘူး။ အဲလိုမျိုး ပြောတာတွေတော့ ကြားခဲ့တယ်။ ဈေးတွေအရမ်းတက်တော့ မရှိဆင်းရဲသားတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဈေးထဲမှာလည်း လူက မရှိသလောက်ဖြစ်နေကြတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တချိန်တည်းမှာလည်း အဆင့်မြင့် ကုန်တိုက်တွေမှာ စားကုန်တွေ အကန့်အသတ်စဖြစ်လာပုံကိုလည်း သတင်းသင်တန်းဆရာ ကိုမြင့်ကျော် က
ကိုမြင့်ကျော် (သတင်းသင်တန်းဆရာ) ။. ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်ကမှာ ကုန်ပစ္စည်း တမယ် နှစ်မယ်လေ။ တင့်ကျော် သောက်တဲ့ လဘက်ရည် လျော့နည်းနေလို့ဆိုပြီး တဦးလျှင် ၃ဗူးပဲယူပါလို့တော့ အဲလိုရေးထားတယ်။ ဒီဝေဇယန္တာ စီးတီးမတ် မှာလေ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူဈေးကွက်မှာ ဒီနိုင်ငံခြားက တင်သွင်းလာတဲ့ စားကုန်တွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ အခုပြန်အကန့်အသတ်နဲ့ဆုံးရှုံးရမှာ ကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
ငှကွေေး မတညျငွိမျမှုကွောငျ့ စားသုံးကုနျ လုပျငနျးတှထေိခိုကျ
မွနျမာနိုငျငံမှာ မကွာသေးခငျကစလို့ ကပျြငှတေနျဘိုး ကဆြငျးခဲ့တာကွောငျ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှအေပျေါ ရိုကျခတျလာနရောမှာ စားသုံးကုနျ လုပျငနျးတှလေညျး ပါဝငျ လာပါတယျ။ မွနျမာကပျြငှနေဲ့ လဲလှယျရာမှာ အမရေိကနျ ဒျေါလာတနျဘိုး မွငျ့လာတာကွောငျ့ တခြို့စားသုံးကုနျတှေ တငျသှငျးရာမှာ အကနျ့အသတျတှနေဲ့လညျး ကွုံနရေတာပါ။ ငှကွေေး မတညျငွိမျတဲ့ အခွအေနကွေောငျ့ နောကျဆကျတှဲ ကွုံနရေတဲ့ စားသောကျကုနျ လုပျငနျးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ လုပျငနျးရှငျတှနေဲ့ စားသုံးသူ တခြို့ကို ကိုဝငျးမငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျး တငျပွထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ မုံဖုတျလုပျငနျးလုပျကိုငျသူ မခိုငျ က...
မခိုငျ (မုံဖုတျလုပျငနျးပိုငျရှငျ) ။. ။ ကုနျကွမျးဈေးနှုနျးတှေ အတကျအကကြွမျးတာပေါ့။ စားသောကျကုနျလုပျငနျးလုပျကိုငျသူတှအေနနေဲ့က ကုနျကွမျးတှကေို အမြားကွီးလညျး ဝယျလှောငျထားလို့မရသလို လိုအပျမှ တလခငျြးဝယျရသလို အခုနောကျလအတှကျဝယျဖို့စ စီစဉျတဲ့အခြိနျက ကုနျကွမျးတှေ ဂြုံကအစ လေးသောငျးကနေ ခုနှဈသောငျးခှဲဖွဈသှားတာကအစ နိုငျငံခွားသှငျးကုနျ Jam တို့ ထောပတျတို့ဆိုလို့ရှိရငျဈေးနှုနျးအတကျအကကြွမျးတော့ကွတော့ ဆိုငျတှကေ အရောငျးဖှငျ့မပေးတော့ဘူး။ ရရှေညျရပျတညျလာတဲ့ လုပျငနျးတခုအနနေဲ့က သဘောက ပေါငျမုံတခုကို တထောငျရောငျးနရောကနေ ခကျြခငျြးကွီး ကုနျကွမျးတကျလို့ဆိုပွီး တထောငျငါးရာ ပွောငျးရောငျးဖို့ မလှယျဘူးပေါ့နျော။ အရငျးကို ပွနျရဖို့အတှကျ တျောတျောခဲခဲရငျးရငျးဖွဈလာတာပေါ့။ စားသုံးသူအတှကျ မငဲ့ပဲ ရောငျးမယျဆိုရငျတော့ တထောငျတနျမုံကနေ နှဈထောငျဆိုပွီး ဆှဲတငျလိုကျရငျတော့ အမွတျကနျြခငျြကနျြမှာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ စားသုံးသူနညျးသှားမယျ့ဟာကိုလညျး ကိုယျတှကေ မလိုလားဘူးပေါ့။ ဒီကွားထဲမှာ ကဉျြးထဲကွပျထဲ ပွသာနာစကွုံတှနေ့ရေတာပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ ရနျကုနျမှာ အသားကငျလုပျငနျးလုပျကိုငျသူ လူငယျ ကိုဝမေငျး ကလညျး
ကိုဝမေငျး (အသားကငျလုပျငနျးလုပျကိုငျသူ) ။. ။ ဂြုံနဲ့ပတျသကျတာ ဈေးတကျသှားတယျ။ တနကေ့ပဲ ကနြျော ပလာတာဝယျစားတာ ပုံမှနျ ၂၅ဝ တနျက အခု ၅ဝဝတောငျဖွဈသှားတာ။ ၂ဆတကျသှားတာ။ ဈေးထဲမှာ ထိုငျးဖကျက လာတာတှကေို ဝယျစားတာတှဆေို တျောတျောမြားမြား ဈေးတကျသှားတာ။ ဒီတရကျ ၂ရကျအတှငျးမှာ တထောငျဝနျးကငျြတကျသှားတယျ။ ပုံမှနျ ၈၀၀ တနျပစ်စညျးက ထိုငျးဖကျက ပစ်စညျးက ၁၃ဝဝ လောကျတကျသှားတယျ။ အသားပွားတို့ ကွကျအူခြောငျးတို့ ပုဇှနျလုံးတို့လေ။ ခုလောလောဆယျမှာ ထိုငျးဖကျ ကပစ်စညျးရောငျးနတောပေါ့။ အရငျလို ပေါပေါလောလောနဲ့ ရောငျးမရတော့ဘူးပေါ့။ ဈေးတှတေကျတော့ သိပျအဆငျမပွဘေူးပေါ့။ အရငျက မကွုံဖူးဘူး။ အခုမှကွုံဖူးတာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလိုအခြိနျမှာ ဈေးထဲရောကျခဲ့တဲ့ စီးပှားရေးနဲ့ ဘှဲ့ရခဲ့သူ မပိုပို က
မပိုပို ။. ။ သားငါးဈေးကတော့ ထှထှေထေူးထူးအရမျးပွောငျးလဲသှားတာတော့ မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံခွားကဝငျတဲ့ ပစ်စညျးတှပေေါ့ ဒီခြိဈ တို့ဘာတို့ ဈေးကွီးသှားတယျ။ ခေါကျဆှဲခွောကျတှဈေေးကွီးတယျ။ ခြီဈ က အရငျတုံးက ၃၅ဝဝတနျကနပွေီး အခု ၄ဝဝဝ ။ ဝယျရငျးဈေးက နောကျဆိုရငျ ပွနျပွီးဈေးကွီးမှာဖွဈတဲ့အတှကျ နောကျထပျထပျဝငျရငျ ဈေးကွီးမှာလို့ပွောတယျ။ အှနျလိုငျးဆိုရှယျမီဒီယာမှာတော့ လူတှကေ စိုးရိမျပူပနျမှုတှမြေားကွတယျ။ စီးပှားရေးကို ဒီထကျပိုဆိုးလာမှာကိုတော့ မြှျောလငျ့ထားပွီးသား။ ဒါပမေယျ အခွခေံလူတနျးစားအတှကျက ပိုပွီး ဒုက်ခရောကျမယျ။ ကုနျဈေးနှုနျးကလညျး အခုက စစခငျြးမို့မတကျသေးတာ။ နောကျဆိုပိုပွီးတော့ တကျတော့မယျ။ အခုဆိုလညျး အလုပျတှအေမြားကွီး ပွုတျကွတယျလေ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ တခွားစားကုနျတှေ ဈေးတကျလာပုံကိုလညျး အမညျမဖျောလိုတဲ့ အိမျရှငျမတဦး က
အိမျရှငျမတဦး ။. ။ ဆနျဈေးကတော့ အစတုံးက တအိပျကို ခွောကျသောငျး ကြျောကြျောလောကျပဲရှိတယျ။ အခုဟာက ၇ သောငျး ကြျောသှားပွီ။ ဒီပွငျ ပစ်စညျးတှလေညျး အကုနျလုံး ဈေးတကျတယျ။ ကွကျဥပဲ နညျးနညျး ဈေးကှာတယျ။ စားအုနျးဆီက အစက ၄ထောငျကနေ အခု ၅ ထောငျဖွဈသှားပွီ။ အကုနျတကျတယျ။ နံပွားတခပျြ ၃ရာ။ အရငျက ၁၅၀ ၊၂ဝဝ ပဲရှိတယျ။ ဈေးသညျတှကေ ကုနျဈေးနှုနျးတှကေ တကျတော့ ရောငျးမကောငျးဘူး ၊ ဝယျသူတှလေညျး သိပျမရှိဘူး။ အဲလိုမြိုး ပွောတာတှတေော့ ကွားခဲ့တယျ။ ဈေးတှအေရမျးတကျတော့ မရှိဆငျးရဲသားတှေ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ။ ဈေးထဲမှာလညျး လူက မရှိသလောကျဖွဈနကွေတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တခြိနျတညျးမှာလညျး အဆငျ့မွငျ့ ကုနျတိုကျတှမှော စားကုနျတှေ အကနျ့အသတျစဖွဈလာပုံကိုလညျး သတငျးသငျတနျးဆရာ ကိုမွငျ့ကြျော က
ကိုမွငျ့ကြျော (သတငျးသငျတနျးဆရာ) ။. ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ ရကျလောကျကမှာ ကုနျပစ်စညျး တမယျ နှဈမယျလေ။ တငျ့ကြျော သောကျတဲ့ လဘကျရညျ လြော့နညျးနလေို့ဆိုပွီး တဦးလြှငျ ၃ဗူးပဲယူပါလို့တော့ အဲလိုရေးထားတယျ။ ဒီဝဇေယန်တာ စီးတီးမတျ မှာလေ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ မွနျမာနိုငျငံ စားသုံးသူဈေးကှကျမှာ ဒီနိုငျငံခွားက တငျသှငျးလာတဲ့ စားကုနျတှေ မြားပွားလာတာနဲ့အမြှ အခုပွနျအကနျ့အသတျနဲ့ဆုံးရှုံးရမှာ ကို စိုးရိမျနကွေပါတယျခငျဗြာ။